umuthi wenhlanhla 908
Impilo luhambo futhi ngamunye wethu ufanelwe ukujabulela ukuhamba. Yebo kuzoba khona ukuphakama nokwehla kulolu hambo kepha yindlela esibhekana ngayo nabaphansi nokuthi sizinqoba kanjani izithiyo ezingezinhle ezichaza ukuthi singobani futhi zichaze indlela yethu nesiphetho sethu. umuthi wenhlanhla.
Uma ufuna isithandwa esilahlekile, noma ufuna isithandwa esisha, singasiza. Sihlanganisa kabusha uthando olulahlekile futhi sisiza abanye ukuthi bathole abalingani babo bomphefumulo ngokujayelekile ngothando lwangempela nolunamandla umuthi wenhlanhla.
Thuthukisa ngokuphawulekayo isikhalazo sakho “sokunqanda”. Lesi sipelingi singaletha ubuhle bakho bangaphakathi, sivumele abanye ukuthi babone ukukhanga kwakho kobulili, ubuntu bakho obukhangayo, izimfanelo zakho ezinhle. Ngeke nje uzizwe ungcono ngawe, kepha lapho ukubukwa nezincomo kuza kuwe, ukuzethemba kwakho kuzokhula, futhi ungazizwa uphezulu emhlabeni. Futhi kufanele ube ngoba ungumuntu okhetheke kakhulu. umuthi wenhlanhla
Previousworking caster spells